Rehefa misy olona mandainga aminao, ity no fomba tsara indrindra hamaliana - Fifandraisana
Ahoana ny fomba hamaliana rehefa hitanao fa nisy olona nandainga taminao
Mahita olona mandainga ianao… ary maharary izany.
Mahatsapa vilany amin'ny fihetseham-po ianao manomboka mipoipoitra ao anatinao.
Fahatezerana, fahatairana, lolompo, fahadisoam-panantenana, alahelo.
Ary izany dia ho an'ny vao manomboka.
Ny zava-drehetra dia mamela tsiro ratsy ao am-bavanao. Tsy voahaja ianao, afa-baraka… mety lasa lavitra mihitsy aza ianao milaza fa mahatsiaro voatafika.
Ary fanitsakitsahana ny fitokisanao izany. Ny fitoviana ara-pitondrantena sy ara-pihetseham-po izay niforona teo anelanelanao sy ilay nahavita dia nohamaivanina.
Simba ny fifandraisanareo.
Fa inona no ataonao amin'izany?
Inona no fomba tsara indrindra hamaliana ny lainga?
Ahoana no tokony hataonao amin'ny olona nandainga taminao?
Inona no azonao lazaina amin'izy ireo?
Ary, amin'ny farany, ahoana no ahafahanao miala amin'ny lainga?
Fanontaniana sarotra valiana ireo. Ny valiny ‘marina’ dia tsy hitovy amin'ny olona tsirairay.
Fa izahay, farafaharatsiny, afaka manome anao ny fomba ahaizanao hery mamaly sy inona ianao afaka Azy.
ahoana no hahafantarana raha liana aminao izy
Alohan'ny hanombohanao handamina ny fomba tsara indrindra hiatrehana ny lainga, mila mijery zavatra misimisy kokoa ianao…
Tombano ny toe-javatra sy ny toe-javatra
Betsaka kokoa ny lainga noho ny fahitana azy. Andian-teny mahasarika, eny, fa iray izay mitazona fahamarinana marobe (mariho ny fanesoana ao amin'ny lahatsoratra momba ny lainga).
Hitanareo, ny lainga dia tsy holazaina amin'ny fitokana-monina madio mihitsy. Misy olona manana ny antony handainga, na dia toa tsy dia be loatra aza ireo antony ireo antonony .
Ary, na dia mety tsy tiantsika hanaiky izany aza isika rehetra dia mandainga be isan'andro amin'ny fiainantsika.
Mampalahelo ireo lainga fotsy bitika ireo, saingy ampahan'ny ankapobeny amin'ny fifandraisana ara-tsosialy ary fahalalana olona iray .
Azonao atao ny miaina ny fiainanao amin'ny fahatsorana tsy misy dikany, mahery setra, saingy mety hitanao fa io fomba io dia manodinkodina volom-borona sasany ary mandroaka olona.
Saingy miverina amin'ny teboka… ity lainga nolazaina anao ity dia mihoatra ny noeritreretina ho ampahany amin'ny fifanarahana ara-tsosialy mihazona mangina isika rehetra.
Ity lainga ity dia tsy azo odian-tsy jerena fa etikety ara-tsosialy fotsiny. Zava-dehibe kokoa noho izany.
Ka mba hahitana izay fomba tsara hamaliana azy dia tsy maintsy mametraka fanontaniana maromaro aloha isika.
Iza no nandainga?
Ny ampandaingan'ny mpiara-miasa aminao dia mety hanorisory anao angamba, fa mety tsy hotapahina amin'ny taolana.
Ny lainga lazain'ny namana iray dia handratra kokoa, na dia hiankina amin'ny sakaizan'izy ireo na namana tena sakaiza aza ny hamafin'ilay ratra natao.
Lainga voalaza amin'ny fifandraisana akaiky tena hanindrona ary hanimba ny ny fifandraisana akaiky aminao sy ny fifandraisanao amin'ny vadinao .
Toy izany koa, ny lainga lazain'ny olona ao amin'ny fianakaviana dia mety hiteraka fanaintainana, alahelo ary fitadiavana fanahy.
Nahoana izy ireo no nandainga?
Indraindray, ny olona dia mandainga noho ny tsy fahatokisan-tena, ny tahotra na ny fitaintainanana nefa tsy tsapany akory hoe manao izany izy. Izy io dia mekanika velona amin'ny karazany.
Tsy tokony hanala tsiny kely ny lainga izany. Ary tsy mahatonga azy io ho kely azo ekena na handratra.
Matetika anefa ny olona dia mahatsapa fa mandainga izy ary mandray fanapahan-kevitra am-pahatapahan-kevitra hiatrika izany.
Tsy midika akory izany fa misy fikasana na antony ratsy foana.
IREO lainga fotsy kely lazaintsika rehetra fa matetika natao hanalefahana ny fitsikerana, na hamonjy ny andaniny roa amin'ny resaka mahamenatra izay tena tsy mila mitranga.
Rehefa miteny aminao ny reninao fa tena tiany ny kilasy fandaminana voninkazo nandefasanao azy tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany - na dia hitany aza fa somary nanintona sy nandreraka izany rehetra izany - dia mandainga izy mba hamonjeny ny fahatsapanao.
Ireny karazan-lainga ireny dia mahazatra ary na dia hitanao aza ny marina dia mety ho azonao ny antony nitantarany azy.
Karazana lainga hafa na izany aza, tsy dia mora loatra ny tsy mijery na mamela heloka.
Izahay dia miresaka momba ny lainga voalaza mba hanafenana eritreritra, hevitra na fihetsika tsy azo ekena.
Sabatra roa lela ireo lainga ireo. Miteraka fanaintainana izy ireo tsy noho ny fitaka natao ihany, fa noho izy ireo koa manafina fahamarinana mitovy maharary.
Fa maninona ny olona no milaza an'izany karazana lainga izany?
Nolazain'izy ireo taminà lainga tsy marina miboridana mba hialana amin'ny sazy na fanomezan-tsiny.
Mandainga izy ireo hamonjy ny hodiny.
Mety hiteny ilay nahavanon-doza fa tsy te handratra ny fihetseham-ponao izy ireo. Na dia mety ho marina aza izany, dia tonga ny segondra faharoa amin'ny antony nisafidianan'izy ireo handainga.
Anisan'ny antony mahatonga ireo lainga ireo handratra be. Tsy izany tena nolazaina ho tombontsoanao mihintsy.
Ka raha ny vadinao no mandainga momba ny fiasana tara any amin'ny birao rehefa izy ireo, raha ny marina, misotro zava-pisotro miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy, ho tombontsoany tanteraka izany.
Ary raha milaza ny iray tam-po aminao fa tsy afaka mamerina ny vola nampindrana azy ireo ianao, na dia hita aza ny fandanjalanjan'ny banky azy ireo, dia satria tsy te hamaly anao izy ireo (ary mety manantena ianao fa hanadino izany).
Karazana lainga fahatelo mipetraka amin'ny faritra somary volondavenona. Lainga no ambara mba hahazoana karazana tombony na tombony ambonin'ilay olona nolazaina taminy.
Tsy mampidi-doza amin'ny heviny fa tsy natao hanisy ratsy na handratra mivantana ilay olona.
Eny, ny lainga dia ampiasaina hanafenana fampahalalana manan-danja sasany, saingy izany fampahalalana izany dia tsy, raha izany, dia miteraka fanaintainana lehibe.
Lazao, ohatra, fa misokatra ny toerana iray any am-piasana ary manontany ny mpiara-miasa aminao ianao raha hanaiky izy ireo. Mety handainga izy ireo ary hilaza fa tsy rehefa, raha ny marina, dia izy ireo.
Lainga izany, eny, saingy mety nolazain'izy ireo fa hahazo tombony kokoa noho ianao amin'ny resaka fahazoana izany fampiroboroboana izany.
Mety hiteny ianao fa famadihana ity - ary raha mifanakaiky amina olona iray ianao dia mbola hahatsapa izany ihany - saingy mety hiteny izy ireo fa tsy nanisy ratsy anao izany ka inona no olana?
Misy lainga hafa ambara amin'ny fikasana tsara indrindra, ary mety ho azonao ny fanjohian-kevitra, saingy mety hahatsiaro ho voadona na hamadika ianao.
Makà mpitantana iray izay tsy milaza aminao momba ny tetikasa vaovao na fifanarahana vaovao satria fantatr'izy ireo fa manana be dia be amin'ny takelakao ianao izao, na any am-piasana na any an-trano.
A lainga fanadalana amin'ny hoe tsy nandainga mivantana tamin'ny tavanao izy ireo, fa tsy niresaka taminao zavatra vitsivitsy fotsiny.
zavatra mahafinaritra tokony hatao rehefa mankaleo ianao
Ary mety nieritreritra izy ireo fa nanao soa taminao.
Ka, araka ny hitanao, ny 'maninona' ao ambadiky ny lainga dia mety miovaova be. Ny famaritana azy dia afaka manampy anao hanapa-kevitra hoe ahoana no hamaly azy.
Hatraiza ny lainga?
Ny lainga sasany dia kely ary tsy mendrika handanianao angovo be loatra hiasana.
Raha milaza aminao ny namanao fa tsy salama izy ireo amin'ny andro tokony hihaonanao, ary hitanao izy ireo tag miaraka amin'ny sary manao zavatra hafa amin'ny olon-kafa, tena raharaha lehibe tokoa ve izany?
Angamba. Na angamba mila manaiky fotsiny ianao fa zavatra hafa no mety ho tonga amin'ny minitra farany ary tena naniry ny hanatona azy izy ireo, saingy tsy te handratra ny fahatsapanao amin'ny fanekena izany.
Etsy ankilany, raha hitanao fa efa namitaka anao ny namanao dia raharaha lehibe freakin io ary tsy misy fomba ahafahanao miborosy na tsy manonona azy.
Ka ny haben'ny lainga - izay zavatra iray tena ifantohana - dia hisy heriny eo amin'ny fomba fandraisanao azy.
Lainga lehibe no mila resahina. Mety tsy hisy ny lainga kely.
Inona avy no vokatr'izany lainga izany?
Ny lainga rehetra dia misy vokany, fa ny sasany lehibe kokoa ary akaiky kokoa noho ny sasany.
Raha mandainga momba ny fanjakan'ny orinasa fotsiny ny lehibenao dia ianao ihany no miverina miasa maraina mba homena ny fanananao ao anaty boaty satria tsy misy asa intsony dia betsaka ny zavatra tokony hoeritreretinao.
Na izany no fotoana mety indrindra hifanatrehana amin'izy ireo ary hanome azy ireo sain'ny sainao dia azo iadian-kevitra.
Na raha toa ka nitahiry aretina nandrahona ainy taminao ny rainao (mety ho hitany ho toy ny fomba hiarovana anao izany) ary hitanao ny momba an'io, dia mety hiahiahy bebe kokoa ianao amin'ny mety hahavery azy noho ny fiampanganao azy. ny lainga.
Indraindray, ny lainga dia mitarika fidirana faharoa amin'ireo raharaha tena azo ampiharina nafenina.
Ka na dia mety te hiteny momba ny lainga sy ny mpandainga aza ianao dia mety hiandry mandra-pitondranao ny vokany eo noho eo.
Io ve ny lainga voalohany, sa fandikan-dalàna miverimberina?
Raha vao mandainga aminao ny olona iray dia mety handratra izany, fa ianao kosa hery afaka miasa ao.
Rehefa milaza lainga bebe kokoa hatrany io olona io dia mety hanjavona ny fahafahanao mamela heloka sy manadino.
Ary na dia kely aza ary toa tsy misy ilana azy ny lainga tsirairay, dia vetivety dia simba tanteraka ny fahatokisana azy ireo.
Ho an'ny iray, mety manomboka manontany tena ianao raha ireo lainga kely ireo dia ny tendron'ny iceberg fotsiny ary misy ratsy lavitra kokoa izay tsy fantatrao.
Ny fomba mety hamalianao ny lainga voalohany dia tsy hitovy amin'ny fomba fandraisanao ny lainga manaraka.
Lahatsoratra mifandraika: Maninona no mandainga ny mpandàla pathological na manery + Famantarana 10 hijerena
Firy taona ny lainga?
Mety tsy hampisy fahasamihafana mihintsy izany, fa raha lainga no nolazaina taloha elabe ary izao vao hipoitra dia mety hafa ny fahatsapanao izany.
Voalohany, miova ny olona amin'ny fotoana rehetra ary matotra amin'ny ankapobeny rehefa mandeha ny taona.
Noho izany, raha nandainga taminao ny namanao iray raha samy 18 taona ianao ary izao vao hitanao ny lainga tamin'ny faha-30 taonanao dia azonao atao ny mihevitra azy io ho rano ao ambanin'ny tetezana ary atsofohy amin'ny tsy fahamatoran'ny adolantsento.
Mety ho afaka hamela ny namanao anio ianao amin'ny fihetsiky ny sakaizanao omaly.
Mazava ho azy, miverina amin'ny haben'ny lainga izany. Ny lainga sasany dia tsy voavela heloka mora foana, na firy na firy ny fotoana lasa.
Raha ny zanakao sakaizanao avy amin'ny fifandraisana teo alohany dia tonga eo am-baravaranao 15 taona ary tsy fantatrao akory hoe nisy izy ireo, ny hatairana noho ny tsy fandaozana lehibe toy izany dia mety hanetsika ny fototry ny fitiavanao ny olon-tianao.
Ohatrinona no lanjainao ny fifandraisana?
Io angamba no antony lehibe indrindra amin'ny famaritana ny fomba fifandraisanao amin'ny olona nandainga taminao.
Inona no tena dikan'ny fifandraisanareo aminao?
Raha ny namanao io ary manan-janaka ianao, dia mety tsy te handray fanapahan-kevitra maimaika izay hanenenanao avy eo.
Mety ho tezitra ianao ary hifanatrika amin'izy ireo, saingy mety mendrika ny hamelana ny vovoka hilamina mandritra ny fotoana kelikely alohan'ny hanapahanao hevitra sao dia manandrana mamonjy ilay fiarahana ianao na tsia.
Toy izany koa, raha misy olona ao amin'ny fianakaviana iray ka tratry ny lainga izay tena maharary anao ara-pihetseham-po, dia tsy ho vita mihitsy ny tsy miresaka amin'izy ireo intsony, indrindra raha hifankahita amin'ny hetsika ara-pianakaviana ianao.
Na raha hitanao fa nisy mpiara-miasa aminao nandainga taminao, ohatrinona ny fotoana sy ny herinao tena andanianao olona tsy dia manandanja toy izany amin'ny fiainanao?
Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny maha-zava-dehibe kokoa anao ny hafa, dia mila mandinika tsara kokoa ny fomba anaovanao ilay lainga ianao.
Fantaro ny fomba tsara indrindra hamaliana
Vantany vao noraisinao ny kaonty rehetra etsy ambony, dia vonona ianao hametraka valiny.
Inona avy ireo safidinao?
50 kisendrasendra momba ahy ny fanontaniana
Aza miteny na inona na inona, fa avelao
Henoy aho alohan'ny hamoahanao an'ity hevitra ity.
Eny, fanevatevana anao amin'ny maha olona anao ny lainga, saingy ny valiny ve dia fampiasana mahomby amin'ny fotoanao sy ny herinao?
Tsy ny ady rehetra no mendrika ady.
Betsaka ny feo any izay mitory fa tsy maintsy mijoro amin'ny tenanao ianao! Izay olona itondrany anao amin'ny fomba avelanao hitondrany anao!
Ny olona, ​​amin'ny ankapobeny, dia hitondra anao amin'ny fomba avelanao azy ireo.
Fa ny fijoroana ho anao dia tsy voatery hidradradradra sy hiady hevitra amin'olona. Mety hidika koa izany hoe miala amin'ny olona tsy manaja anao fotsiny ianao.
Raha ny marina, amin'ny famelana ny toe-javatra sy ilay olona any aorianao, dia asehonao ANAO ny fanajana fa tsy azon'izy ireo atao.
Ary tsy omenao azy ireo ny fomba hitondrany anao toy izany indray.
Inona koa, ny kiakiaka sy kiakiaka ary valifaty am-bava atao amin'ilay olona, ​​dia mety tsy hahatsiaro tena ho tsara.
Mifanohitra amin'izany aza, mety hahatsapa ho ratsy kokoa ianao.
Noho izany, matetika dia fihetsika feno fitiavana ny tena ny fisorohana fifandonana mafana.
Ny zava-misy dia, raha eo amin'ny toerana tsapanao fa mila 'mampiofana' ny olona manodidina anao amin'ny fomba hitondrana anao ianao, dia hevitra tsara kokoa ho anao ny mitady vondron'olona vaovao.
Ny ankamaroan'ny olona afaka miova raha tian'izy ireo - fa ny ankamaroany tsy te.
Ny ankamaroany tsy miraharaha koa.
Manandrana mamaky ny androm-piainany fotsiny izy ireo mba hahafahan'izy ireo manatanteraka izay tian'izy ireo atao.
Maninona no mandany volana na taona maro amin'ny fiainanao manandrana mametraka fanabeazana fototra amin'ny olona iray izay tsy afaka nahita lanja ampy anao hanao izany amin'ny voalohany?
Tsy misy dikany firy, marina.
Matetika, ny valiny tsara indrindra amin'ny olona mandainga aminao dia tsy misy valiny mihitsy.
Alefaso fotsiny ao an-tsainao izany ary mandrosoa hatrany. Tsy misy antony hampielezana ny zavatra fantatrao rehetra.
Miteraka lainga sy fanodikodinana bebe kokoa fotsiny ny fifanenjanana.
Saingy tsy maintsy mifanatrika amin'ilay olona aho!
Na inona na inona antony dia tsy maintsy mifanatrika amin'ilay olona ianao.
Angamba olon-tiana izy ireo na olona iray izay ampahany lehibe amin'ny fiainanao.
Tsy ny zava-drehetra amin'ny fiainana dia mety ho mazava sy tsotra.
Ny fomba tsara indrindra hiatrehana olona iray dia amin'ny fialanalanana.
Tsy tezitra ianao. Raha tezitra ianao dia manome bala azy ireo hitifitra anao, izay hahatonga anao ho tezitra, izay hanome azy ireo bala bebe kokoa, ary mitohy hatrany.
Ny fomba tony dia manome anao tombony hanampy amin'ny famaritana ny tena fahamarinana. Ny fitonianao dia hanampy amin'ny fitaovam-piadiana sy fiarovana azy ireo.
Raha hitan'izy ireo fa tsy ho tezitra amin'izy ireo ianao dia mety hisokatra kokoa amin'ny fanaovana ny marina aminao izy ireo.
Mametraha fanontaniana manondro, mivantana, ary jereo tsara ny valinteniny.
Ny olona sasany izay mandainga dia manenina amin'ny fotoana nandalovany ny molony. Mety ho maivamaivana ireo olona ireo raha mivoaka ny lainga.
Hibebaka marina izy ireo ary mety hitady hanazava ny nahatonga ny lainga. Izany dia mampiseho, amin'ny lafiny sasany, fa manaja anao izy ireo ary manome lanja ny fifandraisanao.
Ka ilaina ny mitadidy an'io ao an-tsaina raha sendra izany karazana valiny izany ianao.
Saingy mety tsy handeha amin'ny fomba toy izao ny raharaha, indrindra raha mifanerasera amin'ny manipulator ianao.
Matetika ny manipulator dia mamoaka ny fahatezerana ary manandrana mandrangitra ady, satria manova ny resak'izy ireo amin'ny fomban'izy ireo izany.
Mety hamoaka andian-teny toy ny hoe, 'Tsy mino aho hoe tsy matoky ahy ianao !?' ary 'Fa maninona no miampanga ahy amin'izany ianao?' rehefa manandrana mamerina ny tsiny aminao izy ireo.
Raiso indray ny adinao. Tsy ny ady rehetra no mendrika ady. Ary raha tsy mahatoky maharitra ny olona, ​​dia tsy hanao fandrosoana tena izy ianao.
Ny zavatra mitranga matetika dia miala tsiny aminao fotsiny ny mpandainga (na dia tsy miala tsiny aza izy ireo), manome toky anao fa tsy hisy intsony izany (izay mety hitranga), ary averimberinao mandritra ny taona maro ny tsingerina mandra-pahatsapanao fa tsy hiova izy ireo.
Noho izany, atreho ilay olona raha tsy maintsy atao ianao, nefa jereo tsara ny fihetsik'izy ireo. Izany dia afaka milaza betsaka aminao momba ny antony manosika sy ny fihetseham-pony.
Mandroso mihoatra ny lainga
Raha manapa-kevitra ianao fa tsy te hiala amin'ny lainga sy ny mpandainga (na tsy afaka noho ny antony azo ampiharina), ahoana no tokony handrosoanao?
tsy ho tanteraka ny nofiko
Voalohany indrindra, manantitrantitra fa milaza ny marina tanteraka amin'ny laingany izy ireo. Angamba ampahany ihany no fantatrao, fa misy bebe kokoa izay tsy lazain'izy ireo aminao.
Omeo fotoana izy ireo mba hadio tanteraka. Lazao azy ireo fa any amin'ny toerana iray ianao izao izay mety hahafahanao miroso, na dia betsaka aza ny zavatra tsy fantatrao.
Lazao azy ireo ihany koa fa mety tsy izany no izy raha misy lainga misimisy hipoitra avy eo.
Aza miteny fotsiny hoe: 'Misy zavatra hafa tianao holazaina amiko?' Mety hangina izany.
Jereo, nanao hadisoana ianao. Manao fahadisoana daholo isika. Vonona ny hamela anao aho ary handalo izany, fa ny hahafahako manao izany dia mila fantatro ny zava-nitranga rehetra.
Izao no fotoana mety indrindra hihainoako ireo pitsopitsony ireo satria nanaiky ny toe-javatra nisy azy aho. Afaka mahita fomba hamakivakiana an'ity ho antsika aho. Raha misy antsipiriany bebe kokoa hivoaka amin'ny daty manaraka, tsy azoko antoka fa ho afaka hiteny toy izany aho avy eo.
Ankehitriny, raha manambara zavatra hafa izy ireo ary ratsy kokoa noho ny nieritreretanao azy izany dia tsy voafatotry ny teninao ianao. Izay nolazainao dia tsy mandrafitra fifanarahana am-bava.
Tsy mila mamela azy ireo ianao ary mandroso. Misy zavatra tsy azo avela heloka.
Nilaza ianao fa misy vintana hahafahanao miroso. Tsy niantoka izany ianao.
Fa ianao kosa dia ho tsara kokoa amin'ny fahalalana ireo zavatra ireo mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra feno momba ny hoavinao.
Mazava ho azy, mety hamoaka antsipiriany bebe kokoa izy ireo izay tsy tena manova ny toe-javatra. Amin'ity tranga ity dia tokony hisaoranao izy ireo noho ny fahamarinany ary hifanakalo hevitra momba ny fomba ahafahanao mandroso miaraka.
Amin'ny vintana rehetra, ny valinteninao dia hampiseho azy ireo fa afaka manao ny marina aminao izy ireo nefa tsy matahotra izay mety ho vokatr'izany.
Araka ny efa nolazainay teo aloha dia mandainga ny olona sasany satria manahy ny mety ho dikan'ny milaza ny marina izy ireo. Manana tsy fahatokisan-tena ho azy ireo izy ireo.
Raha hitany fa misy valiny tsara ny fahamarinana, dia mety ho vonona hisokatra aminao izy ireo amin'ny ho avy.
Lahatsoratra mifandraika: Fomba 9 hiatrehana famadihana sy fanasitranana amin'ny ratra
Mpandainga sy mpanara-maso eo amin'ny toeram-piasana
Ny tontolon'ny asa mahafinaritra dia afaka mametraka antsika eo akaikin'ny karazan'olona marobe. Ny sasany ho lehibe, ny hafa tsy ho lehibe.
Ary mety ho eo amin'ny toerana iray amin'ny fiainanao ianao izay tsy afaka manova asa fotsiny na miala amin'ny filana. Tsy dia tsotra foana izany.
Misy fomba tsara sasany hiatrehana ny fiarahana miasa amin'ny olona mpandainga na mpanodikodina.
Aza ambarao amin'ny antsipirihany ny fiainanao manokana na ny asanao raha tsy tena mila izany ianao. Tsy misy antony hanomezana bala ny olona misy poizina hanimba anao any aoriana.
Aza avela hampiala anao amin'ny fahatsapana tsy fandriam-pahalemana ilay olona amin'ny alàlan'ny fisakaizana na fiahiahy.
Aza soraty araka izay azonao atao ny momba ny asanao miaraka amin'ilay olona. Tokony mikasa ny hitrangan'ny olona ianao amin'ny amboadia raha toa ka misy zavatra tsy mety ataonareo roa.
Ny antontan-taratasy no hanaporofoana fa nanao zavatra araka ny noeritreretinao azy ireo ianao, araka ny nanontaniana.
Ary raha ny lehibenao? Eny, izany dia karazana kankana hafa tanteraka.
Indraindray ianao dia afaka mahazo valiny amin'ny alàlan'ny fanarahana mpitantana iray ary mankany ambony. Fotoana hafa handroahana anao na handroahana azy fotsiny.
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny safidy tsara kokoa dia ny manomboka mitady asa hafa raha efa teo izy ireo nandritra ny fotoana fohy, satria efa namboarin'izy ireo ny fitantanana mba hitiavany azy ireo.
Ny fomba safidinao hiatrehana ny lainga sy ny mpandainga dia miankina amin'ny soatoavinao sy ny finoanao manokana.
Raha ny maha-marina no zava-dehibe indrindra amin'ny maha-ianao anao ary mirehareha amin'ny filazanao ny marina ianao dia mety ho sarotra aminao ny mampifanaraka izany amin'ilay lainga nolazaina.
Fa raha ekenao fa zavaboary kilema daholo isika rehetra ary mety nanao fahadisoana ianao ary nandratra olona taloha (na dia tsy nisy lainga aza tafiditra ao) dia manana fotoana mety kokoa ianao hanohizana ny fifandraisana.
Azo inoana fa tsy maintsy mitsara ny lainga tsirairay avy ianao satria tsy misy roa tsy mitovy. Ny torohevitra eto dia mety ho afaka hitarika anao ho mpitari-dalana, fa ny fahatsapanao no mpitari-dalana tsara indrindra antenainao.
Na izany aza mety tianao ny manamarina lainga izay nolazaina, raha tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao ny fahatsapanao dia tokony hatoky ny fahatsapanao ianao isaky ny mandeha.
Mbola tsy azonao antoka izay tokony hataonao momba ilay olona nandainga taminao?Toe-javatra sarotra sy marefo ity, saingy tsy iray no tsy maintsy hatrehinao irery. Ny firesahana amin'ny mpanolo-tsaina amin'ny fifandraisana, na ianao irery na miaraka amin'ilay olona hafa, dia afaka manampy anao hahatratra ny vahaolana.Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahafantatra ny fomba handrosoana mialoha. Tsotra.
Famantarana famantarana 10 milaza fa mandainga ianao
Zavatra 11 Ny olona mahatoky marina ihany no mahazo ny fiainana
inona no hatao rehefa tratra manambaka
famantarana izay tadiaviny mihoatra ny mihantona
famantarana fa te hanao firaisana aminao izy
alice in Wonderland nalaina daholo isika rehetra eto
ahoana no hilazana raha misy ankizivavy tia